Monomethyl auristatin E (MMAE) powder (474645-27-7) ≥98% | AASraw
Monomethyl auristatin E (MMAE) powder
/ Products / MaR & D Reagents / Monomethyl auristatin E (MMAE) upfu
Rating: SKU: 474645-27-7. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatanidzwa uye unogadzira kugona kubva ku gramu kusvika pakuteerana kweMonomethyl auristatin E (MMAE) poda (474645-27-7), pasi peCGMP mutemo uye nehunoteedzesa mhando yekutonga mhando.
Monomethyl auristatin E (MMAE) powder video
Monomethyl auristatin E (MMAE) powder Basic Characters
Name: Monomethyl auristatin E (MMAE) powder
Molecular Formula: C39H67N5O7
Molecular Kurema: 717.97858
Melt Point: 238-240 ° C
Storage Temp: Chengeta mumudziyo wepakutanga, pakati pe36 kusvika ku 46 digirii F
Monomethyl auristatin E powder se antimitotic agent
Brentuximab vedotin, MMAE powder
Monomethyl auristatin E powder Usage
• Vanhu vakuru
Monotherapy, 1.8 mg / kg (kwete kudarika 180 mg / dozi) IV masvondo ose e3; pamwe chete nekemotherapy, 1.2 mg / kg (kwete kudarika 120 mg / dozi) IV masvondo ose e2.
Monomethyl auristatin E powder (MMAE powder, vedotin) inhengo ine antimitotic ine simba kwazvo iyo inodzivisa kupatsanurwa kwemasero nekudzivirira kudimbiswa kwema tubulin. Mhuri yeauristatins inofananidzwa nemagetsi emhando yemiti yakasikwa Dolastatin 10, ultrapotent cytotoxic microtubule inhibitor inoshandiswa mumakiriniki se payloads mu anti-anti-drug conjugates. Monomethyl auristatin E powder kana MMAE powder ndeye 100-1000 nguva yakawanda kupfuura doxorubicin (Adriamycin / Rubex) uye haigoni kushandiswa sechirwere pachayo. Zvisinei, sechikamu che anti anti-drug conjugate kana ADC, MMAE powder inobatanidzwa kune monoclonal antibody (mAb) inobvuma mutsara unorema mumasero ekenza uye inotungamirira MMAE powder kune imwe, inotarirwa nekenza cell.
The linker inobatanidza MMAE powder kune monoclonal antibody yakasimba mu extracellular fluid, asi inonamatwa ne cathepsin kana anti-drug-conjugate yakasangana nekenza seni cell antigen uye yakapinda mukenza yemahara, mushure mokunge ADC ibudisa iyo inouraya MMAE powder uye inobatanidza iyo yakasimba anti-mitotic mechanism. Zvirwere zvechirwere chechirwere chechirwere chinoshandisa zvinodhaka zvinowedzera zvinokonzerwa nemagadzirirwo evanhu uye zvinoderedza kusagadzikana kwezvinhu zvinokonzerwa nemakirotoxic ane simba zvikuru.
Warning on Monomethyl auristatin E powder
• Pneumonitis, zvirwere zvepummoni, kupemha kunetseka
Kuwedzera kusina kunetsa kwepinumineyumu (eg, pneumonitis, interstitial pulmonary disease, zvakanyanya kuporesa dambudziko syndrome) yakataurwa ne brentuximab therapy; zvimwe zviitiko zvakanga zvichisauraya. Chengetedza varwere zviratidzo uye zviratidzo zvepinimoni inonyadzisira yakadai sekukanganiswa uye dyspnea. Ongorora varwere vanovandudza zviratidzo zvitsva kana kuwedzera kukura; kubata brentuximab kusvikira zviratidzo zvichinatsiridza. Izvo zvinoshandiswa kushandiswa kwebrentuximab ne bleomycin-ine chemotherapy (off-label), yakadai seABVD (adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine), inopesana nekuda kwehuwandu hwekusava neutachiona hwemapukisa. Kupindirana kwemukati uye / kana kuputika (kunowanikwa pachifukidzo che X-ray kana kuverengera tomographic imaging) kwakaitika kakawanda muHodgkin lymphoma varwere vakagamuchira brentuximab pamwe neABVD muchirwere chechipatara kana vachienzaniswa nevarwere vezvematongerwe enyika vakagamuchira ABVD voga. Zviitiko zvakawanda zvakagadziriswa kutevera corticosteroid kurapa.
Peripheral neuropathy, kunyanya pfungwa yeurouropathy, yakambotaurwa ne brentuximab vedotin therapy; purogiramu neuropathy inowedzera. Chengetedza varwere kune zviratidzo zveuropathy (eg, hypoesthesia, hyperesthesia, paresthesia, kusagadzikana, kutsva kunzwa, kurwadziwa kweukama, kana kushaya simba). Kurasikirwa kwekodzero, kuderedza kuyerwa, kana kuregera kunogona kudiwa kune varwere vanovandudza mutsva kana kuti kuwedzera kwehutachiona hwepfungwa.
• Chirwere chemaanti, geriatric, neutropenia, thrombocytopenia
Yakakura hematologic toxicities (semuenzaniso, kuperevedza ropa, hosha, uye neutropenia) uye zviitiko zvinouraya uye zvakakomba zve febrile neutropenia zvakataurwa ne brentuximab vedotin therapy; neutropenia inogona kuwedzerwa (inogara 1 vhiki kana kupfuura). Vachirwere vehutano vane makore anopfuura 65 uye vanopfuura neHodgkin lymphoma avo vakagamuchira brentuximab vedotin pamwe chete nekemotherapy vane mazinga akakwirira e febrile neutropenia kana vachienzanisa nevarwere vaduku. Iva neropa rakazara rinotangira mushure mega rega brentuximab dose uye kakawanda kana grade 3 kana 4 neutropenia ichiitika; chengetedza varwere vose nokuda kwefivha. Kurasikirwa kwekodzero, kupereta kuwedzerwa, kana kuregera kunogona kudiwa kune varwere vanovandudza grade 3 kana 4 neutropenia; funga kuwedzera kweprophylactic granulocyte-colony inokurudzira chinokonzera (G-CSF) nemitambo inotevera. Kutungamira G-CSF kutanga nehutano 1 kune varwere vanowana brentuximab vedotin pamwe chete nekemotherapy.
• Kutambisa lysis syndrome (TLS)
Tumor lysis syndrome (TLS) yakataurwa kune varwere vakagamuchira brentuximab vedotin. Varwere vane zvirwere zvinopararira nokukurumidza uye / kana kurema mutoro mutoro kunogona kuva nehuwandu hwekuwedzera TLS. Chengeta varwere nezviratidzo zveTLS (semuenzaniso, serum electrolytes, uric acid, serum creatinine) vasati vasvika uye panguva yekurapa; inotanga chirongwa chakakodzera cheprazil uye kurapwa (semuenzaniso, hydration, uric acid inoderedza chirwere) sezvinodiwa.
• Kufambira mberi kweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy
Nhamba dzinouraya dzekufambira mberi kwehutano hupenyu hukuru hwekukura (PML), dzinokonzerwa nehutachiona hwaJohn Cunningham (JC virus), dzakataurwa ne brentuximab therapy; zvimwe zviitiko zvakaitika mukati mekutanga kwemwedzi ye3 yekutanga kurapa. Varwere vane utano husati hwasangana nehutachiona kana kuti immunosuppressive zvirwere zvinogona kunge zviri kuwedzera mungozi yeJC virusi zvirwere uye PML. Ongorora varwere vanovandudza maitiro matsva eurological, kunzwisisa, kana maitiro uye zviratidzo zvakadai sekuchinja maitiro kana mufambiro; nyonganyonga; kukanganwa kwepfungwa; kuchinja pane zvakaratidzwa, kutaura, kana kufamba; uye / kana kuderedza simba kana simba pane rumwe rutivi rwemuviri. Bata therapy kana PML ichifungidzirwa; kurega brentuximab mune varwere vane confirmed PML.
• Dzorera kukanganisa
Dzivisa kushandiswa kwebrentuximab vedotin muvarwere vane hutachiona hwekushaya simba (creatinine clearance (CrCl) pasi pe 30 mL / min). Chiitiko chegadziriro 3 kana zviitiko zvakashata zvakanyanya uye rufu rwakanga ruchiwedzera kune varwere vane urema hwakakomba hwekushaya simba kana vachienzaniswa nevarwere vane chirwere chinowanzoitwa renal (CrCl guru kupfuura 80 mL / min) mune zviduku, imwe-dose pharmacokinetic kudzidza.
• Chirwere chepfungwa
Dzivisa kushandisa brentuximab vedotin kune varwere vane mwero (Child-Pugh B) kana yakaoma (Child-Pugh C) chirwere chehepatic / impairment; imwe yakaderera inotanga inotarirwa kune varwere vane hupatic impairment yepamusoro (Child-Pugh A). Chiitiko chegadziriro 3 kana zviitiko zvakashata zvakanyanya uye rufu rwakanyanya kune varwere vane uwandu hwepakati kana hutsinye hwakakomba huenzaniswa nevarwere vane hutano hwemazuva ose mune zviduku, imwe-dose pharmacokinetic kudzidza. Hepatotoxicity (p., Hepatocellular bless, high enzyme hepatic, uye hyperbilirubinemia) yakataurwa ne brentuximab vedotin therapy. Zvimwe zviitiko zvakaitika mushure mekutanga kwetaiti kana pamushonga rechallenge; kufa kwehupatotoxicity yakafanirwa. Chengeta chiropa chekushanda (LFTs), kusanganisira bilirubin, kare uye panguva yekurapa. Kurasikirwa kwekodzero, kupereta kuwedzerwa, kana kuregera kunogona kudiwa kune varwere vanovandudza mutsva, kuwedzera, kana kuti nguva dzose hepatotoxicity. Varwere vane chirwere chekare chinenge chiripo kana kuti LFTs yakakwirira pamusana wekutanga uye varwere vari kugamuchira mishonga inogadzirisa zvinogona kunge vari mungozi yakawanda yekuvandudza hepatotoxicity.
• Kurwara, sepsis
Zvirwere zvinopesana nezvimwe zvirwere zvakakomba, kusanganisira pneumonia, bacteremia, uye sepisis (mamwe mamiriro ezvinhu anouraya), akataurwa ne brentuximab vedotin therapy. Gara uchitarisa varwere panguva yekurapa zviratidzo uye zviratidzo zvebhakitiriya, fungal, kana utachiona hwehutachiona.
• Kukanganisa kwehutano hwepamuviri
Kugadziriswa kwehutachiona hunosanganisira kufanana nevanaphylaxis kwakaziviswa ne brentuximab vedotin therapy; saka, chengetedza varwere vari pedyo nezviratidzo zvekupindura panguva yebrentuximab inopiswa. Pakarepo uye usagadzikana zvachose chirwere kana anaphylaxis ichiitika. Rega kuiswa uye kuisa chirongwa chakakodzera chekurapa kune varwere vanovandudza kushandiswa kwehutachiona. Kunyanya kunzwisiswa (semuenzaniso, acetaminophen, antihistamine, uye / kana corticosteroid) mushure mekutsvayamiswa kwevatachiona avo vakambotarisana nehutano hwehutachiona.
• Kurwara, GI kubuda ropa, chirwere cheGI, kuvharwa kweGI, kuputika kweGI, kuputika kweputi, chirwere chinonzi peptic ulcer
Matambudziko makuru emavhu (GI) zvinetso kusanganisira GI perforation, GI kubuda ropa, GI kudengenyeka, chirwere chechirwere chechirwere, GI kudzivisa, neutropenic colitis, enterocolitis, uye ileus zvakataurwa ne brentuximab vedotin therapy; zvimwe zviitiko zvakaguma norufu. Kurumidza kuongorora uye kubata chirwere cheGI kuvarwere vanovandudza zviratidzo zveGI zvitsva kana kuwedzera. Shandisa brentuximab nekuchenjerera kune varwere vane nhoroondo yeGI chirwere. Varwere vane nhoroondo ye lymphoma neGI kubatanidzwa kunogona kunge kune ngozi yakawanda yeGI kupera.
Brentuximab vedotin inogona kukonzera kukuvara kwekuberekwa kana ikashandiswa panguva yekuzvitakura inobva pakugadzirisa kwekuita uye nedhidzo kubva kune zvidzidzo zvemhuka. Madzimai ekukwanisa kubereka anofanira kurayirwa kuti arege kuva nepamuviri paanenge achiwana brentuximab. Kana mukadzi akava nepamuviri paanenge achitora mishonga iyi, anofanira kuongororwa nezvingangova nengozi kumucheche. Muzvidzidzo zvemhuka, embryo-fetal toxicities iyo yakabatana nehutano husina kusimba yakaonekwa paBrentuximab mitsara yakaguma nekuratidzwa kwechikadzi kwakange yakafanana nekuisa pachena kwevanhu pachirongwa chakanaka.
• Kuita zvepabonde zvinodiwa, kusabereka, kutenderwa kwevarume, kutakura pamuviri, njodzi yekubereka
Zano revarwere pamusoro pekudzivirira kwekubereka nekudzivirira pamuviri panguva yebrentuximab vedotin kurapwa. Kubata pamuviri kunofanira kuitwa musati watanga brentuximab mukati mevarwere vechikadzi vanogona kubereka. Vachirwere vanofanira kushandisa nzira yekudzivirira kubata zvakanaka uye kudzivisa kubata pamuviri panguva uye kwekunge kwechinguva 6 mwedzi mushure mokunge brentuximab therapy. Vakadzi vanotora pamuviri pavanenge vachigamuchira brentuximab vanofanira kudzidziswa nezvingangova nengozi kumucheche. Uyezve, varwere varume vane vakadzi vanogona kuita zvekuberekwa vanofanira kushandisa kushanda kwakanaka kwepabonde munguva yekurapa uye kwemwedzi miviri ye6 mushure mekurapa nemhaka yehutano hwehutano hwevanhu hunopindirana. Kubva pane zvidzidzo zvemhuka, brentuximab inogona kukonzera kusununguka kune varume.
• Kupa mazamu
Hapana ruzivo runowanikwa pamusoro pehupo hwe brentuximab vedotin mumukaka wemunhu, zvinokonzerwa nechechechecheche, kana zvinokonzerwa nekugadzirwa kwemukaka. Pamusana pezvakakonzera kukanganisa kwakakomba muchechecheche (semuenzaniso, cytopenias uye neurologic kana masimba kune toxicities), kuyamwisa hakukurudzirwi panguva yebrentuximab therapy. Chimbofunga kubatsira kwekuyamwisa, mungozi yekusviviswa kwemishonga yemwana, uye ngozi yekusatorwa kana kusagadzikana. Kana mucheche anoyamwisa anonzwa kuipa kunobatanidza nemishonga inoberekwa nevabereki, vatapi vezvehutano vanokurudzirwa kurondedzera kukanganisa kwakaipa kwaDFA.
Monomethyl auristatin E powder (MMAE powder) inonyatsobudiswa kubva kune SGN-35 mukati meCD30 + masero ekenza uye, nemhaka yekubwinya kwayo, inokwanisa kuita basa re cytotoxic pamasero akamira. MMAE powder inokurudzira mazita emaronda e-colorectal uye pancreatic kuva IR mune imwe purogiramu uye nzira inotarisirwa neipi inobatanidza nemitoo yakasungwa. Radiosensitization inoratidzwa nekuderera kwekuchengetedzwa kwechigoni uye kuwedzerwa kweDNA zvakapetwa kaviri mumasero akajeka.
Monomethyl auristatin E Raw Powder
Monomethyl auristatin E Raw Powder Mapoka
Kubvunzurudza Mutengi wedu Mumiririri (CSR) nezvemashoko, nekuda kwako.
Monomethyl auristatin E powder Marketing
IV. Nzira yekutenga Monomethyl auristatin E powder; kutenga MMAE powder kubva kuAASRAW?